musha nyika dzakabatana WWE Superstars Drew McIntyre Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeWWE Superstar. Icho chizere chakafukidzwa chaDrew McIntyre Wevacheche Nyaya, Hupenyu, Mhuri Chokwadi, Vabereki, Hupenyu hwepakutanga, Mavambo uye zvimwe zvinozivikanwa zviitiko kubva achiri mudiki kusvika paakatanga kufarirwa.
Ehe, munhu wese anoziva kuti iye anonyanya kufarirwa hunhu muWWE. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Drew McIntyre's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Drew McIntyre Nyaya Yevechidiki:
Kutanga kubva, Andrew McLean Galloway IV akazvarwa pazuva re6th raJune 1985 kuguta reAyrshire muScotland. Akazvarwa kuna amai vake, Gare gare Angela Anne Galloway uye kuna baba vake, Andrew Galloway Sr.Pazasi payo pikicha yevabereki vaDrew McIntyre vanogona kunge vari mukutanga kwavo 50's uye 60's.
Wakanga uchiziva here kuti nyika yeScotland ine mhuri yekuEurope yekutanga yakakurira mumhuri yepakati mhuri yemhuri kuPrestwick kuAyshire kwaakakurira pamwe chete nababamunini izvo zvichiri kuzozivikanwa panguva yekunyora iyi biography?
Kurera mutaundi rePrestwick muAyrshire, mudiki McIntyre aive mwana aibvunza aisanyanyo farira zvekurwa. Kana iye akange asina zvidhori zveudiki mumutambo.
Drew McIntyre Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Mudiki McIntyre aifarira kuverenga nekutamba nhabvu, mutambo waakapihwa mari zhinji kuPrestwick Academy kwaaitamba mukirabhu yechikoro semudziviriri. McIntyre akatofunga kutora bhora sebasa rehunyanzvi! Yakanga isiri iyo kusvikira iye mukomana mudiki panguva iyoyo ave wechidiki kuti zvido zvake zvishoma nezvishoma zvakatungamira mukurwa.
Kuverenga nekutamba nhabvu zvaive zviitiko zvaitonga chikamu chiri nani chehudiki hwake.
McIntyre ane makore gumi nemashanu akazoita danho rekutanga basa rekuvaka mumutambo uye akawana maropafadzo evabereki vake akamurayira kuti asanganise kuda kwake kutsva nedzidzo. Zviripachena kuti McIntyre akateerera kuraira kwevabereki vake sezviri pachena munzira yaakapedza nayo chikoro chesekondari ndokuenderera mberi nekuwana degree raTenzi mune zvematsotsi kubva kuGlasgow Caledonia University.
Drew McIntyre Nguva Yekutanga Yehupenyu Hupenyu:
Kudzidziswa kwaMcIntyre mukurwira kwakatanga muna 2001 kuFrontier Wrestling Alliance's Academy. Ndichiri kuchikoro, mutsimba wekurwa wakadzidziswa nevashandisi veFrontier Wrestling Alliance pamwe chete nenhamba dzekusimudzira dzakamisikidzwa.
Akange akadzidziswa mumutambo nevashandisi uye varwi vekusimudzira kweFrontier Wrestling Alliance.
Makore maviri gare gare, McIntyre akanyatsodzidziswa akaita dheti rake rekuratidzira kwekutanga kweBritish Championship Wrestling (BCW) muna Ndira 2003 uye akazoenderera mberi nekudzidziswa. Nguva yacho payakange yakwana, McIntyre - ane zita remuchadenga rekuti “Iwe” - akaita mutambo wake wekutanga mukurwisa kurwisa Stu Natt munaKukadzi waNo Ropa, Kwete Tsitsi: Husiku 1.
Drew McIntyre Mugwagwa Wokurumbira Nhau:
Izvo zvinokwana kucherechedza kuti McIntyre aive nebasa rakadzama rekuwina uye kurasikirwa paBritish Championship Wrestling (BCW). Nekudaro, nyaya iyi yaive yakati siyanei padunhu rakazvimirira umo McIntyre akakunda zita rake rekutanga kuIWW International Heavyweight Championship.
Mumashure memitambo yekuedza akaona McIntyre achiva wechipiri-Insane Championship Wrestling (ICW) Heavyweight Champion asati abatana neWorld Wrestling Entertainment WWE muna 2007. Wakanga uchiziva here kuti McIntyre aive nebasa risinganyanye kufambiswa ne WWE pakati pa2007 - 2014? Nekudaro, mutsimba akachekwa ne WWE mu 2014!
Wrestler wako waunofarira aimbove asingafarirwe zvekuti WWE yakasarudza kumubvisa.
Drew McIntyre Kukwira Kumukurumbira Nyaya:
Kwete mumwe wekusiya, McIntyre akapedza makore matatu akatevera achizvimisikidza panguva yekukasimudzira inosanganisira iyo Insane Championship Wrestling (ICW), Evolve, Total Nonstop Action Wrestling, Pro Wrestling Guerrilla uye kunyange dunhu rakazvimirira.
Paakadzokerazve kuWWE mu2017, McIntyre akakunda iyo yekuvandudza mhando - NXT Championship muna Nyamavhuvhu gore iro. Hazvina kutora nguva asati atamira kuWWE main roster mu2018 uye zvishoma nezvishoma akazove anodikanwa nefeni paRaw pakati pe2018 na2019. Kubudirira kwake kukuru kwakazouya mukutanga kwa2020 paakakunda Royal Rumble nekubvisa shasha yeWWE Brock Lesnar. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Mcintyre akawana nzira yake yekudzokera kuWWE ndokuenderera mberi kuhwina iyo Royal Rumble inokurudzira kune vateveri vake uye vavengi zvakafanana.
Drew McIntyre Hukama Hupenyu Chokwadi:
Kune vashoma vateveri veMcIntyre vanoziva kuti akaroora kaviri. Tinokuunzira chokwadi nezverudo rwake hupenyu. Kutanga, McIntyre aive nerudo achibatwa nemukadzi wrestler Taryn Terrell. Idzo dzaive musoro pamusoro pezvitsitsinho zverudo zvekuti Terrell akanyora kukurumidza kumuka kubva pakuva musikana weMcIntyre kuenda kuna fiance muna2009 uye pakupedzisira ave mukadzi muna 2010.
Drew McIntyre naTaryn Terrell.
Zvinosuruvarisa kuti vakarambana mu2011 naMcIntyre vachitarisa pabasa rake mumakore mana akatevera asati asangana nemusikana wake akatevera akazova mudzimai - Kaitlyn Frohnapfel. Kaitlyn aimbove mutambi wekoreji uye mudzidzisi wemuviri. McIntyre akasangana naye mu2016 ndokuenderera mberi nekuita pamwe nekusunga pfumo naye gore irero. Ivo vaviri vacho havana kana vanakomana (kana) kana mwanasikana (kana) panguva yekunyora, kana hukama hwavo hwapfuura havana kupa kuberekwa kwevana.
Drew McIntyre nemukadzi wake Kaitlyn Frohnapfel vave vakaroora kweanopfuura makore matatu.
Drew McIntyre Hupenyu Hwemhuri Hupenyu:
Ndiani Drew McIntyre asina mhuri uye angave akawana sei mukurumbira pasina tsigiro yorudo yevabereki vake nevanin'ina? Isu tinopa chokwadi pamusoro paDrew McIntyre nhengo dzemhuri kutanga nevabereki vake.
About Drew McIntyre baba naamai: Izvo hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezve baba vaDrew McIntyre Andrew Galloway Sr. Zvisinei, amai vake Angela Anne Galloway mukadzi waanoti ndiye mukurumbira. Sekureva kweiye wrestler, Anne akamurera zvakanaka kunyangwe achirwisa kenza uye Cerebellar Ataxia. Kusvika parufu rwake mu2019, Anne akagovana hukama hwepedyo nevana vake vaasina kumbomira kutsigira.
Mufananidzo usingawanzoitika waDrew McIntyre nevabereki vake.
About Drew McIntyre vana nehama: Kufamba kubva kuvabereki vaDrew McIntyre, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezvehama dzake uye hapana marekodhi emhuri yake midzi uye nekwakatangira sezvo zvine hukama nababa nasekuru vake. Wrestler ane vanozivikanwa vashoma babamunini nanababamunini apo babamunini vake, vazukuru uye babamunini vachiri kuzozivikanwa panguva yekunyora.
Drew McIntyre Hupenyu Hwechokwadi Chokwadi:
Kure kubva kune yake mune-mhete kuedza, Drew McIntyre ine hombe yakakura iyo inotsanangurwa naGemini Zodiac maitiro. Anesimba, nyanzvi yekutaurirana, akanaka, anoshinga uye haawanzo kuburitsa chokwadi nezve hupenyu hwake hwepachivande uye hwega.
Kana iye mutsimba asiri panzvimbo yekurovedza muviri kana mhete, anoita mashoma mabasa ave kuzivikanwa sekufarira kwake uye kwaanofarira. Zvinosanganisira kufamba, kutamba & kutarisa mhenyu nhabvu mitambo, kuteerera mimhanzi, kuverenga, kuona mafirimu uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Ona uyo akaonekwa achiona mhenyu mutambo wenhabvu kuSantiago Bernabéu Stadium.
Drew McIntyre Maitiro ehupenyu:
Ehe, Drew McIntyre ari kuita mutsimba senzira yekuzviratidza. Zvisineyi, iye anowana yakawanda mibairo uye mibairo kubva mukurwa kwake uye anogona kutorwa semumwe wevamiriri veWWE vanobhadharwa zvakanaka.
Iye ane inofungidzirwa mambure akakosha anodarika $ 5 mamirioni ayo anoisa humbozha hwehupenyu mukati maanogona kusvika. Kunyangwe kukosha kwechokwadi kweimba nemota dzaMcIntyre zviri kuongororwa panguva yekunyora, haana matambudziko nekubhururuka mumaherikoputa akachekeresa nemukadzi wake Kaitlyn Frohnapfel.
Peep muhupenyu hwoumbozha hwewrestler.
Drew McIntyre Chokwadi:
Heano ekukuputira yedu Drew McIntyre nyaya yehucheche uye biography kuitira kuti ikubatsire iwe kuti utore mufananidzo wake.
Tattoos: McIntyre yakasiyana nedzimwe WWE nyeredzi senge Kutonga kweRoma, Dave Bautista, Randy Orton uye The Undertaker nekuti haana kukura pama tattoo. Muchokwadi, iyo wrestler - nehurefu hwemamita mashanu, matanhatu masendimita - haina hunyanzvi panguva yekunyora uye pamwe inogona kusazowana chero mukufamba kwenguva.
Kusvuta uye kunwa: McIntyre haaputi, kana kupihwa kunwa panguva yekunyora. Iye ari pachinzvimbo chekuchengeta hupenyu hune hutano sezvaanotarisa maziso ake pakiriniki mamwe mazita makuru muWWE.
Zvipfuwo: Iwe unoziva here kuti McIntyre yakakura pane mhuka dzinovarairwa chaizvo katsi? Ivo vanogara muchigaro chimwe chete naye mumba yekutandarira uye vese vanofamba nemota imwechete. Anowanzovaita kuti varatidzwe papeji rake re Instagram.
Drew McIntyre neimwe yekitsi yake.
Chitendero: Hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezve chitendero chaDrew McIntyre panguva yekunyora. Nekudaro, kusawirirana kuri mukumufarira kuve mutendi nekuti akambobvuma kuti anonamata zvishoma.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Drew McIntyre Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
VERENGA Lars Sullivan Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts